Kordhiyo - halista la dhayalsaday Surges waa khatar inta badan la dhayalsan karo. Qulqulka 'danabyada danab' (ku meelgaarka ah) ee qaadanaya kaliya laba ilbidhiqsi waxaa sababa tooska, dhawaqa iyo hillaaca fog ama howlaha howlaha korantada. Hillaac toos ah iyo mid u dhow Toos ama u dhow ...
Dood Cilmiyeedka Ilaalinta Hillaaca Caalamiga ee 4aad
Shirka 4aad ee Caalamiga ah ee Ilaalinta Hillaaca waxaa lagu qaban doonaa Shenzhen China Oktoobar 25-keeda ilaa 26-keeda. Shirka Caalamiga ah ee Ilaalinta Hillaaca ayaa markii ugu horreysay lagu qabtay Shiinaha. Xirfadleyda ilaalinta hillaaca ee Shiinaha waxay noqon karaan kuwo maxalli ah. Kaqeybgalka xirfadlayaal heer caalami ah ...
Kordhinta iyo ilaalinta
Dhaawaca ay keenaan korantada ku-meel-gaadhka ah ama kor u kaca ayaa ah mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee qalabka korontada u xumaada. Ku-meelgaarka korantadu waa mid muddo gaaban soconaya, oo garaaca wadnaha oo sarreeya oo lagu dabaqo nidaamka tamarta caadiga ah isla marka uu wareegga si lama filaan ah isu beddelo. laga bilaabo noocyo dhanaan ...